Ngaba uyayiqonda le ndoda yamantombazana emfutshane? Bathi kwangaphandle utshintshile encinane ukususela ebuntwaneni. Nangona kunjalo, kule sithombe kunzima ukubona ubuso obuhle, buhlanganiswe yi-violin, apho iqhawe lethu lifunde ukudlala iminyaka eli-7 yonke. Esi sixhobo asihambelani nanoma yiphi indlela ngomfanekiso wanamhlanje womntu onzima kunye nomSarbha okhwela kwiibhawundi ezinqamlekileyo, ukubetha i-snouts nanoma yisiphi na isihlandlo kwaye alala namanqaku.
Ukususela ebusheni bokuqala, i-violinist yethu yaqala ukubonisa umdla omkhulu wesini esahlukileyo. Ngaphezu koko, udale ubudlelwane kunye namantombazana asekhulile kwaye unamava. Xa lo mfana waba udumo, wayebizwa ngokuba ngumcimbi kunye noKsenia Sobchak, uVictoria Boni, Masha Malinovskaya noVictoria Lopyreva.
Kwiminyaka engama-30 ubudala, ukuthanda umdlalo onamava kuye kwatshintsha ngendlela edibeneyo: ngoku ngoku amantombazana amthanda kakhulu. Ukongezelela, wathandana neenveli zinobuhle. Ngoko intombazana yakhe esemthethweni yayiyi-Second Vice-Miss Russia 2012. Owesibini waguqulela kwi-First. Ngoku iqhawe lethu lisebudlelwaneni obusemthethweni kunye no-Vice-Miss Russia 2014.
Ngoko, uyaqonda ukuba ngubani ethetha ngaye? Njengesiphakamiso sinikela ngeefoto ezininzi zezingane ze hero yethu. Ngaphantsi kwesi sihlandlo uya kufumana impendulo efanelekileyo.
Impendulo echanekileyo: umqambi uTimati
Isobho saseNtaliyane kunye nenkukhu yokudla inyama
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli ye-fennel
Ikhekhe lomtshato lomzukulu ka-Alla Pugacheva ubiza iiligidi ezi-2
Imifuno - iivithamini kunye namaprotheni kubantu
Inkukhu yenkomo kunye nemifuno namantongomane
Ukuphuhliswa kwabantwana ukufika unyaka, ukufunda ukususela kumntwana
Iidrafta ze Curd kunye nemifuno
Indlela yokujonga ibutsha kuneminyaka yakho